May 13, 2019 - MM Live News
အပူချိန်တွေ မြင့်တက်နိုင်တဲ့အတွက် သတိပြုနေထိုင်ဖို့ ဒေါက်တာထွန်းလွင် သတိပေးပြီ…..
အပူချိန်တွေ မြင့်တက်နိုင်တဲ့အတွက် သတိပြုနေထိုင်ဖို့ ဒေါက်တာထွန်းလွင် သတိပေး အနောက်တောင်မုတ်သုံလေ မြန်မာနိုင်ငံကို အဝင်နောက်ကျတာကြောင့် မေ ၁၅ ရက်နေ့ကနေ ၂၁ ရက်နေ့အတွင်း ပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့ တိုင်းဒေသကြီး ၁၁ ခုမှာ အပူချိန်တွေ ဆက်ပြီးမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ မိုးလေဝသပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်က ပြောပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းနဲ့ တနင်္သာရီတိုင်းတို့ကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာ အန္တရာယ်ရှိလောက်တဲ့ အပူချိန်တွေ ဖြစ်လာနိုင်လို့ အထူးဂရုစိုက်နေထိုင်ဖို့ သတိပေးထား တာဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာထွန်းလွင်က RFA ကို ပြောပါတယ်။ အနောက်တောင်မုတ်သုံလေဟာ မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေကို မေလလယ်လောက်နဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေ သတွေမှာ မေလ ၂၁ ကနေ ၂၅ ရက်အတွင်းဝင်ရောက်နိုင်ပြီး အလယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာ မေလ ၂၆ ကနေ ၂၉ အတွင်း၊ […]
ဖေ့ဘွတ် ပေါ်က ချစ်သူကို ယုံစားပြီး ခရီးဝေးကနေ ချိန်းတဲ့နေရာထိ လိုက်လာမိတဲ့ ၁၄ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးရဲ့ အဖြစ် … ကောင်မလေးက အသက်(၁၄)နှစ်။ နာမည်က မ​အေးသဇင်​ဦး ၁၄နှစ်​ (ဘ)ဦး​အောင်​မြင့်​ (မိ) ​ဒေါ်​ချောစု နာဂဒူး​ကျေးရွာ ​ကော့ကရိတ်​မြို့ ကရင်ပြည်နယ်ကပါ။ ခေါ်ဆောင်တဲ့ ကောင်လေးကတော့ အောက်က အကျီ င်္အနီနဲ့ ပုံပါ အကောင့်ပိုင်ရှင်ပါ။ သူတို့ဟာသူတို့ ဘယ်လိုချိတ်ဆက် အဆက်အသွယ်လုပ်ပြီး လာခဲ့သလဲတော့မသိဘူး။ မေးမြန်းချက်အရ အတိုချုပ်ပြောရရင် ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးက Online ပေါ်တွေ့တာပေါ့။ ရည်းစား တွေဖြစ်။ကောင်မလေးကလဲ အဖေမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ အားကိုးရှာတာလဲ ဖြစ်မှာပေါ့။ ကောင်လေးက မော်လမြိုင်ကလား ချောင်းဆုံကလား မသိဘူး။ လိုင်းပေါ်ကတဆင့်တက် ဖုန်းနဲ့အချိတ် အဆက်လုပ်ပြီး ကောင်မလေး ကိုခေါ်တယ်။ လာခဲ့ပေါ့။ […]
ဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ ထိုင်းကလာတဲ့ငှက်သိုက်ဘူးတွေထဲမှာ သကြားနဲ့ ဆေးကုလားမတွေပဲပါတယ်တဲ့….. ဆေးကုလားမကို ငှက်သိုက်အားဆေးဆိုပြီး ထိုင်းတွေက ဗမာကို ဂျင်းထည့်ထားတာပါ။ လျှော်ဖြူ (ခ) ဆေးကုလားမ (Botanical name = Sterculia versicolor wall) အပင်က ထွက်တဲ့ အစေးကို အရည်အသွေးအလိုက် Grade လေးမျိုး ခွဲထားပါတယ်။ ကြာဇံ ၊ ရေခဲ ၊ ဝါဂွမ်း နဲ့ ဂျွန် လို့ ခေါ်ကြတယ်။အဲဒီ အထဲက ကြာဇံ အမျှင်ကို ထိုင်းက Traditional Medicine ထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက ဗမာပြည် အလယ်ပိုင်းအထိ အသည်းအသန် လိုက်ဝယ်တယ်။ ငှက်သိုက် အားဆေးထဲ မှာ ထည့်ဖို့ ဝယ်တာဖြစ်တယ်။ တစ်ပိသာကို နယ်စပ်ဈေး ကိုးသောင်းလောက် အထိ […]
ညည နှစ်​​ထောင်​​ပေးမယ်​ ငါး​ထောင်​ဆိုပြီး မကူညီဘဲ ​ခြေ​တော်​တင်​ဖို့ ကြိုးစားနေကြတဲ့ ၁၈ နှစ်​အရွယ်​​လေးရဲ့ဘ၀….
ညည နှစ်​​ထောင်​​ပေးမယ်​ ငါး​ထောင်​ ​ပေးမယ်​တဲ့- က​လေးအ​မေ ၁၈ နှစ်​အရွယ်​​လေးခဗျာ ….မကူညီဘဲ ​ခြေ​တော်​တင်​ဖို့ ကြိုးစားကြသူ​တွေ ရဲ့ ဝိုင်းရံ​နေခြင်းကို ခံရတယ်​…. ညည နှစ်​​ထောင်​ ငါး​ထောင်​ ကိုပဲထိုင်​ယူ​နေရင်​​တောင်​ သူ့ သမီး​လေးနဲ့ သူ အဆင်​​ပြေတဲ့ဘဝ ရနိူင်​​ကောင်းရဲ့….. သို့ ​သော်​လဲ ဇာမဏီငှက်​တို့ ရဲ့ နှလုံးသားလိုမျိုး အသက်​​သေမှ အမြှီးကျွတ်​ခံမယ်​ဆိုတဲ့ စိတ်​နဲ့အနီးနား အဝတ်​​လျှော်​ မီးပူတိုက်​ရင်း ဖြူစင်​စွာ သားအမိနှစ်​​ယောက်​ အသက်​​မွေးမြူကြတယ်​…. အိမ်​ကအစုတ်​ လူ​တွေကလဲ အစုတ်​……ဒါ​ပေမယ့်​ သူတို့ သားအမိရဲ့ နှလုံးသားမစုတ်​ပြတ်​ခဲ့ဘူး …..လင်​မရှိ ​ဆွေမျိုးမရှိလို့ …… အနီးနား​စောင့်​​ရှောက်​သူ​တွေ ​ပေးထားတဲ့ ​နေရာ​လေးမှာ အ​မေနဲ့ သမီး ​အပြန်​အလှန်​ ​မေတ္တာ​တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းလို့ လှပလို […]
စိန်ခေါ်လိုက်ပြီ….. ပန်ချီဆရာကိုထိန်လင်း ဟုတ်လား ….ခင်ဗျားဆွဲတာပန်ချီမှမဟုတ်ပဲ ပန်ချီပြခန်းထဲလာတဲ့လူတွေကို ထမိန်အနံ့ရှုခိုင်းနေပုံထောက်တော့ မေမေ့သားများလား ထားပါလေ ….. ကျုပ်လိုရင်းပဲပြောမယ် ခင်ဗျားလည်းပန်ချီဆရာ ကျုပ်လည်း ဆီဆေး ရေဆေး ခဲဆွဲ အကုန်ရတယ် ….2002 တုန်းက လောကသစ္စာ နာမည်နဲ့ ကျုပ် သရုပ်ဆောင် သျှားညိုပန်ချီပြခန်းမှာ ကျုပ်ပန်ချီကားချပ် ၁၃ ချပ် ပြခဲ့ဖူးတယ် ….. ဒီတော့ ကျုပ်စိန်ခေါ်တယ် ခင်ဗျားနဲ့ကျုပ် ပန်ချီ ပြိုင်ဆွဲမယ် ရှုံးတဲ့သူ ပန်ချီဆွဲတဲ့ လက်ဖြတ်ကြေး ဒီလိုစိန်ခေါ်ရတာက နောက်ထပ် ကျုပ်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုထပ်မစော်ကားနိုင်အောင် ကျုပ်ကိုယ်ကျုပ်လည်းယုံကြည်လို့ စိန်ခေါ်လိုက်တာပဲ ….. ခင်ဗျားကျုပ်ပိုစ့်မြင်ရင် အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပါ……စိတ်ကြိုက် share နိုင်တယ် ……ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် ညီညွတ်ကြပါ…..နှင်းမောင် unicode စိနျချေါလိုကျပွီ….. ပနျခြီဆရာကိုထိနျလငျး ဟုတျလား […]
ပူအိုက်တဲ့ရာသီမှာ သတိထားပြီးအိပ်ကြပါ တင်နိုင်ထွန်း(လှိုင်သာယာ) အမှုမှာ ၁၁.၅.၂၀၁၉ ရက်နေ့(၂၂;၃၀)အချိန် တရားလို မ——–(၁၈)နှစ် သည် ပူအိုက်သဖြင့် နောက်ဖေးပြတင်းတံခါ အားဖွင့်ပြီး….. အိပ်ခန်းအတွင်း အိပ်ယာဝင်ခဲ့ရာအိပ်ပျော်သွားပြီး( ၀၂;၃၀)အချိန် ၎င်း၏ခြေတောက်အား တစ်စုံတစ်ယောက်မှ လက်ဖြင့် ထိကိုင်နေသဖြင့် အိပ်ယာမှလန့်နိုးပြီး ကြည့်လိုက်ရာ… ဘေးခြင်းကပ် အဆောင်နေ အောင် ကျော်စိုး(ခ)ကတုံး ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသဖြင့် အော်ရန်ပြုလုပ်စဉ် မအော်နဲ့အော်ရင်သတ်ပစ်မည်ဟုခြိမ်းခြောက်ပြီး….သားမယားအဖြစ် မိနစ် (၃၀)ခန့် ပြုကျင့်ပြီး ပြတင်းပေါက်မှ ထွက်ပြေးသွားကြောင်း ပြောပြသိရှိရသည်…..။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မိမိအား အလိုမတူပဲ သားမယားအဖြစ်ပြုကျင့်သူ အောင်ကျော်စိုး(ခ)ကတုံးအား အရေးယူပေးပါရန်တိုင်တန်သဖြင့် လှိုင်သာယာမြို့မရဲစခန်းမှ…. အောင်ကျော်စိုး(ခ)ကတုံး (၂၄)နှစ် ဘီအိုစီလမ်း (၅)ရပ်ကွက် လှိ င်သာယာမြို့နယ်နေသူအား ပ/၂၈၆၆/၁၉ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၇၆ ဖြင့် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ […]
`မင်းမိန်းမနဲ့ တစ်​ည​ပေးအိပ်​ပါ ဘဲတစ်​အုပ်​​ပေးမယ်​​´ပြောဆိုသူကို ​ယောကျာ်းဖြစ်​သူက ရိုက်​သတ်​မှု
May 13, 2019 MM Live News
ဘဲတစ်အုပ်ပေးမယ် မင်းမိန်းမနဲ့ တစ်ညပေးအိပ်” လို့ ပြောသူကို ရိုက်သတ်မှု ဖြစ်ပွား လင်​မယားနှစ်ဦး အိပ်ေ​နသည့်​တဲသို့ ည ၁၂နာရီ​ကျော်​ အိမ်​​ပေါ်တက်​လာပြီး ..`မင်းမိန်းမနဲ့ တစ်​ည​ပေးအိပ်​ပါ ဘဲတစ်​အုပ်​​ပေးမယ်​​´ပြောဆိုသူကို ​ယောကျာ်းဖြစ်​သူက ရိုက်​သတ်​မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် ၁.၅.၂၀၁၉.ရက်နေ့ည၉နာရီအချိန်လင်မယားနှစ်ဦးအိပ်ယာဝင်ခဲ့ကြောင်း။ ည၁၂နာရီ၄၅မိနစ်အချိန် လူတစ်ဦးအိမ်ပေါ်ရောက်လာကာ ‘မင်းမိန်းမနဲ့တစ်ညလောက်ပေးအိပ်ပါ။ ဘဲတစ်အုပ်ပေးမယ်။တစ်ညလောက်ပေးအိပ်ပါ’ ပြောဆိုနေသဖြင့်အပြောခံရသူအမျိုးသမီး၏ခင်ပွန်းတော်စပ်သူက ၎င်းပြောဆိုသူအထွက် အနောက်မှ အရှည်(၇)ပေ။လုံးပါတ်(၈) လက္မခန့်ရှိ ကျွန်းသစ်သားတုတ်နှင့်ရိုက်သတ်ကာ စီမံကိန်း မြောင်းထဲတွင်ခြေထောက်နှင့်ပုဆိုးချိတ်ကာထား ပစ်စ်ခဲ့သော လူသတ်မှု ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကျုံပျော်မြို့နယ် ရုံးဒေါင့်နယ်မြေစခန်းပိုင်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းနှင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ #Unicode Version# လငျမယားနှဈဦး အိပျနသေညျ့တဲသို့ ည ၁၂နာရီကြျော အိမျပျေါတကျလာပွီး ..`မငျးမိနျးမနဲ့ တဈညပေးအိပျပါ ဘဲတဈအုပျပေးမယျ´ပွောဆိုသူကို ယောကျြားဖွဈသူက ရိုကျသတျမှု ဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ ၁.၅.၂၀၁၉.ရကျနညေ့၉နာရီအခြိနျလငျမယားနှဈဦးအိပျယာဝငျခဲ့ကွောငျး။ ည၁၂နာရီ၄၅မိနဈအခြိနျ […]
ကံကြီးလှတဲ့ကလေး ကယ်တဲ့သူတွေ့လို့ တော်သေးတာပေါ့ ။
တခဏ ပျော်ရွှင်သာယာမှူ့အတွက် လော်လည်ဖောက်ပြန်ကြတယ် ရလာတဲ့ ရင်သွေးငယ်လေးတွေကိုတော့ သေသေရှင်ရှင်ဆိုပြီး တာဝန်မယူပဲ, စွန်ပစ်ခဲ့ကြတယ်။ ကံကြီးလှတဲ့ကလေး ကယ်တဲ့သူတွေ့လို့ တော်သေးတာပေါ့ ။ လူ့ဘဝဆိုတာ ရခဲပေခြင်းလို့ ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားခဲ့တာကို မေ့လျော့နေကြသလားလူပြည်ကအပ်တစင်းနဲ့ နတ်ပြည်ကအပ်တချောင်းထိတာကမှလွယ်သေးတယ် လူဘဝရခဲတယ်လို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက ဟောတော်မှူခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ ကံကြီးလှတဲ့ကလေးငယ်လေး အသက်ရှည် ကျန်မာစွာ နေနိုင်ပါစေကွယ်။ မူရင်းတင်သူတို့.. လေးစားစွာဖြင့် ရဲရင့် ထွန်း unicode version တခဏ ပြျောရှငျသာယာမှူ့အတှကျ လျောလညျဖေောကျပွနျကွတယျ ရလာတဲ့ ရငျသှေးငယျလေးတှကေိုတော့ သသေရှေငျရှငျဆိုပွီး တာဝနျမယူပဲ, စှနျပဈခဲ့ကွတယျ။ ကံကွီးလှတဲ့ကလေး ကယျတဲ့သူတှလေို့ တျောသေးတာပေါ့ ။ လူ့ဘဝဆိုတာ ရခဲပခွေငျးလို့ ကြှနျတျောတို့ ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရားကဟောကွားခဲ့တာကို မလြေ့ော့နကွေသလားလူပွညျကအပျတစငျးနဲ့ နတျပွညျကအပျတခြောငျးထိတာကမှလှယျသေးတယျ လူဘဝရခဲတယျလို့ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရားက ဟောတျောမှူခဲ့တယျမဟုတျလား။ ကံကွီးလှတဲ့ကလေးငယျလေး […]
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Grade-3 ၊ Grade-6 သင်တန်းတွေဟာ လူသတ်ကွင်းဖြစ်နေသလား?
Grade-3 ၊ Grade-6 သင်တန်းတွေဟာ လူသတ်ကွင်းဖြစ်နေသလား? ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Grade-3 ၊ Grade-6 သင်တန်းတွေဟာ လူသတ်ကွင်းဖြစ်နေသလား? အခုတစ်လော ပညာရေးဌာနမှာ Grade-3 . Grade-6 သင်တန်းတက်ရောက်ရင်း ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ ဆရာဆရာမတွေဟာ များလာနေပါတယ်… မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆိုးရွားလှတဲ့ ရာသီဥတု အပူဒဏ်ကို အံတုပြီး သင်တန်းတက်နေကြရတာ… ဒီနေရာမှာ ရောဂါအခံရှိသောဆရာဆရာမများ၊ အသက်ကြီးသောဆရာဆရာမများ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆရာမများ အနေနဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ အပူဒဏ်ကြောင့် မလိုလားအပ်သော ပြဿ နာများ ၊ အသက်သေသည်အထိ ဖြစ်နေကြရပါတယ်…. မနေ့က ဆရာမလေးတဟ်ယောက် Grade-3 သင်တန်းမှာ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျတယ်… ယောက်ျားဖြစ်သူကို ဖုန်းဆက်ခေါ်တော့ ယောက်ျားက ဆိုင်ကယ်နဲ့လာ၊ဆိုင်ကယ်Accidentဖြစ်တယ် ဒီနေ့ ကြားရသတင်းက ညောင်ဦးမြို့နယ်က ဆရာမကြီးတစ်ယောက် Grade-3သင်တန်းတက်နေစဉ်မှာ ဆုံးပါးသွားတယ်… အရင် […]
ညညရောက်ရင် မလုံခြုံတော့တဲ့အိမ်လေးနှင့်် မသမာသူတွေပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ ၁၈နှစ်အရွယ်ကလေးအမေ သားအမိ
ညည နှစ်​​ထောင်​​ပေးမယ်​ ငါး​ထောင်​​ပေးမယ်​တဲ့- က​လေးအ​မေ ၁၈ နှစ်​အရွယ် ​လေးခဗျာ မကူညီဘဲ ​ခြေ​တော်​တင်​ဖို့ ကြိုးစားကြသူ​တွေ ရဲ့ ဝိုင်းရံ​နေခြင်းကိုခံရတယ် ညည နှစ်​​ထောင်​ ငါး​ထောင်​ ကိုပဲထိုင်​ယူ​နေရင်​​တောင်​ သူ့ သမီး​လေးနဲ့သူ အဆင်​​ပြေတဲ့ဘဝ ရနိူင်​​ကောင်းရဲ့သို့ ​သော်​လဲ ဇာမဏီငှက်​တို့ ရဲ့ နှလုံးသား လိုမျိုး အသက်​​သေမှ အမြှီးကျွတ်​ခံမယ်​ဆိုတဲ့စိတ်​နဲ့ အနီးနား အဝတ်​​လျှော်​ မီးပူတိုက်​ရင်း ဖြူစင်​စွာ သားအမိနှစ်​​ယောက်​ အသက်​​မွေးမြူကြတယ် အိမ်​ကအစုတ်လူ​တွေကလဲ အစုတ်​ဒါ​ပေမယ့်​ သူတို့ သားအမိရဲ့ နှလုံးသားမစုတ်​ပြတ်​ခဲ့ဘူး – လင်​မရှိ ​ဆွေမျိုးမရှိလို့….. အနီးနား​စောင့်​​ရှောက်​သူ​တွေ ​ပေးထားတဲ့​နေရာ​လေးမှာ အ​မေနဲ့ သမီး ​အပြန်​အလှန်​မေတ္တာ​တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းလို့ လှပလို့ ​အေးမြလို့အရွယ်​​ကောင်း​လေး ကို မသမာသူ​တွေလိုင်းသွင်းမှာ […]